Vaovao - Inona no tokony hataoko aorian'ny vaksinako feno amin'ny COVID-19?
Na dia maro amintsika aza no miandry am-pitaintainana ny andro hahafahantsika manomana fotoana hifanarahana amin'ny vaksinin'ny COVID-19 dia mety ho lasa tsy takatrao araka ny noeritreretinao ity andro ity. Ny governora Gavin Newsom (Gavin Newsom) dia nilaza fa manomboka amin'ny 15 aprily dia afaka manendry fotoana hanaovana vaksinin'ny COVID-19 manomboka ny 1, 50 ary 50 taona ny California rehetra 16 taona no ho miakatra. Ny olona mihoatra ny taona dia ho afaka hanao fotoana haingana kokoa.
Nanambara ny filoha Biden nanerana ny firenena fa ny olon-dehibe rehetra any Etazonia dia hahazo ny vaksiny alohan'ny 1 Mey, "Ny tanjona dia ny hampanakaiky an'i Etazonia amin'ny ambaratonga mahazatra amin'ny 4 Jolay."
Raha ao an-tsaina izany rehetra izany dia mety manontany tena ianao hoe: inona no azonao atao aorian'ny vaksininao feno? Ary, angamba ny zava-dehibe kokoa, inona no tsy tokony ataonao?
Zava-dehibe ny fahalalana fa tsy ho voaro amin'ny coronavirus avy hatrany ianao aorian'ny vaksiny voalohany. Izany dia satria mila fotoana amin'ny vatanao ny fananganana antikôdiôma ilaina, izay afaka miaro anao amin'ny COVID-19.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, dia raisina ho "voaaro tanteraka" sy "vaksinina feno" ianao tapa-bolana aorian'ny fakana fanindroany ny vaksinin'ny Pfizer BioNTech na Moderna COVID-19, na tapa-bolana aorian'ny vaksinina tokana "Johnson" & Vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 & Johnson (Johnson & Johnson / Janssen).
Ka nanao ahoana ny tsimatimanota alohan'izay? Ho an'ny vaksinin'ny Moderna sy Pfizer-BioNTech, ny doka voalohany dia hanome anao ny ankamaroan'ny fiarovana amin'ny aretina lehibe, ary ny fatra faharoa dia hitondra anao any. Ho fanampin'izany, mino ny manam-pahaizana fa ny doka faharoa dia afaka manitatra ny faharetan'ny vaksininy.
Nilaza i Wachter fa 14 andro aorian'ny vaksinin'ny Moderna na Pfizer-BioNTech voalohany dia voaro amin'ny 80% ianao. (Raha te handinika ny fongana ny doka faharoa ianao dia tadidio fa ny fitsapana ny vaksinina dia dosie roa, ka ny fahafantarantsika ny vokan'ny vaksinina dia miankina amin'ny fatra roa.)
Ny doka tokana Johnson / Johnson dia manome fiarovana 66% amin'ny ankapobeny aorian'ny tapa-bolana. Rehefa afaka 28 andro, dia afaka misoroka tsara ireo aretina mafy na mafy vokatry ny 85%. Vakio bebe kokoa momba ny fomba fitomboan'ny tsimatimanota aorian'ny vaksiny.
Nilaza i Dr. Peter fa: "Tena zava-dehibe ny fiandrasana roa herinandro aorian'ny tsindrona farany, satria tsy mitovy ny olona rehetra, ary na dia misy olona sasany aza mahazo tombony aloha amin'ny alàlan'ny fananganana antibodies amin'ny proteinina spike, dia tsy marina izany. ho an'ny ankamaroan'ny olona. ” Chin-Hong, mpampianatra momba ny fitsaboana sy manam-pahaizana momba ny areti-mifindra ao amin'ny UCSF.
“Tsy fantatsika hoe iza no handray ny valin'ny antibody aloha. Noho izany, tapa-bolana no omena ny tsirairay aorian'ny tsindrona farany, izay manome toky antsika hitondra tena toy ny olona amin'ny fisedrana ara-pitsaboana ”, hoy izy.
Fampivoarana fohy: Omeo ny vaksiny ny fotoana ilaina mba hiarovana ny vatanao amin'ny COVID-19. Mila mihinana ilay fanafody mandritra ny tapa-bolana ianao mba hahazoana ilay vaksiny tanteraka.
Raha ny voalazan'ny CDC, na dia nanaporofo aza ny fanadihadiana mialoha fa ny olona vita vaksiny tanteraka dia tsy dia mazàna mamindra ny viriosy raha tsy misy fambara, dia mbola mitohy hatrany izany. Izany no antony hiresahantsika ny momba ny olona vita vaksiny izay indraindray mbola mila mandray fepetra fisorohana.
Dr. Chin-Hong dia nilaza hoe: "Betsaka ny porofo ankehitriny fa tsy azo atao ny miparitaka amin'ireo olona mbola tsy vita vaksiny ny olona vita vaksiny. Na izany aza, kely fotsiny ny vintana ankapobeny, "hoy ny Dr. Chin-Hong. .
Noho izany, toy ny zava-mitranga rehetra amin'ny areti-mifindra, tsara kokoa ny mitandrina amin'ny fiarovana ny namanao, ny fianakavianao ary ny vondron'olona lehibe kokoa, ary araho ny torolàlana etsy ambany.
Ny kinova fohy: Mbola tsy azonay antoka raha hisakana anao tsy hanaparitaka ilay virus ny vaksinin'ny COVID-19 feno. Noho izany, amin'ny tranga sasany dia mila mitandrina hatrany ianao.
Ny CDC dia nanambara fa ny mety hitrangan'ny olona voan'ny vaksiny feno COVID-19 dia "ambany" - fa ny tena tokony ho fantatrao dia ny soritr'aretin'ny COVID-19.
Raha sendra olona iray ianao izay ahiahiana na voan'ny COVID-19, saingy vita vaksiny ianao ary tsy manana soritr'aretina toy ny COVID dia tsy tokony hatokana ho faty ianao ary tsy mila hosedraina. Nilaza ny CDC fa satria ambany dia ambany ny loza mety hitranga aminao.
Na izany aza, raha miharihary ianao ary miteraka soritr'aretina, nilaza ny CDC fa tokony hitokana amin'ny hafa ianao ary hanao fanadinana. Rehefa mitranga izany dia zava-dehibe ny ampahafantaro ny mpitsabo anao fa vaksinina feno ianao.
CDC koa dia manome torolàlana amin'ny antsipiriany bebe kokoa ho an'ireo olona vita vaksiny feno izay mipetraka na miasa amina toerana fanangonana na toeram-piasana avo lenta.
Raha fintinina: ny risika hahazoana COVID-19 aorian'ny fanaovana vaksiny feno dia ambany, saingy tandremo ny soritr'aretina.
Eny, azonao atao! Ny torolàlana US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dia milaza fa ny olona vita vaksiny dia afaka mihantona ao an-trano miaraka amin'ireo olona vita vaksiny hafa nefa tsy misy saron-tava ary tsy mifanalavitra ny fiaraha-monina.
Ohatra, ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia nanambara fa raha vaksinina feno ianao, dia "tsy azo inoana fa hanasa namana hafa vita vaksiny hisakafo hariva ao an-tranonao manokana ianao."
Na izany aza, ny CDC dia mbola manentana ny olona vita vaksiny tanteraka hanangona ireo fivoriana ireo amin'ny faran'ny iray hafa. Nolazaina fa izany dia satria ny "fivoriana antonony na lehibe, ary fivoriambe izay misy olona tsy vita volo avy amin'ny fianakaviana maro" dia hampitombo ny risika hiparitaka amin'ny COVID-19.
Nilaza i Dr. Chin-Hong: "Zava-dehibe io isa io satria isan'ny orona sy vavan'ny olona avy amina vondrona risika samihafa fotsiny izy io." “Arakaraka ny isan'ny olona anananao (vita vaksiny na tsy vita vaksiny), dia vao mainka betsaka ny olona tsy mandray tsara ny vaksininy sy ny mety hitrangan'ny vatan'ny olona voan'ny COVID. Noho izany, lalao statistika io raha ny marina. ”
Raha nanao vaksiny ianao ary mahita fa misy fivoriana maro, ny CDC dia mamporisika anao hanohy hanaraka fomba fisorohana COVID-19, ao anatin'izany ny fialofana sy ny fialana amin'ny fiaraha-monina.
Raha fintinina: ambany ny atahorana ho an'ny olona vita vaksiny ny miaraka miaraka amin'ilay olona vita vaksiny, nefa mbola hitazona ny antoko ho kelinao ihany.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC), raha mitsidika ny tranon'olona tsy vita vaksiny ianao (olona vita vaksiny iray manontolo) dia tokony ho afaka hitsidika azy ireo ao anaty trano ianao ary tsy misy sarontava. Raha atao teny hafa, raha mbola olona tsy mbola nanao vaksiny dia tsy ahiana tratran'ny COVID-19.
Na dia vondron'olona misy risika be aza ny iray amin'ireo olona tsy vita vaksiny, dia mbola afaka mitsidika azy ireo ao anaty trano ianao (ilay olona vita vaksiny) raha mbola mampihatra fepetra fisorohana COVID-19 ianao, toy ny fanaovana sarontava tery ary mitazona farafahakeliny 6 metatra miala ny elanelana , misafidiana toerana misy rivotra tsara ary manasa tanana. Raha mitsidika olona tsy voamarina avy amin'ny fianakaviana maro ianao dia mihatra ihany koa ity torohevitra ity.
Ary, araka ny voalaza tetsy aloha, raha manao fivoriana antonony na lehibe amin'ny olona maro ianao (na inona na inona vaksiny na tsia) dia tokony hanohy hitandrina ianao amin'ny COVID-19, toy ny famindra toerana ara-tsosialy sy sarontava.
Misy sary azo ampiasaina eo an-tampon'ny CDC izay mitanisa ireo toe-javatra ireo. Maninona raha tahirizina amin'ny telefaona?
Ny fehezan-teny fohy: Raha tsy misy olona atahorana mafy, dia afaka miaraka amin'ny fianakaviana tsy vaksiny ianao, aza manao sarontava na tazomy ny halaviranao. Misy zavatra hafa tokony hifantohana.
Vao tsy ela akory izay, dia maro ny faritra Bay Bay no niditra ny naoty orange, izay manondro fa “antonony” ny loza ateraky ny fifindran'ny coronavirus. Midika izany fa afaka miverina amin'ny sinema, trano fisakafoanana ary tobim-panatanjahan-tena ny olona, ​​na efa nahazo ny vaksiny na tsia, na dia voafetra aza ny fahaizan'ireo toerana ireo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia vita vaksiny tanteraka aza ianao, dia tokony hanohy hanao fahazarana ara-pahasalamana imasom-bahoaka, "ao anatin'izany ny fanaovana sarontava, mitazona ny halaviran'ny vatanao (farafahakeliny 6 metatra), fisorohana ny vahoaka, fisorohana ireo toerana tsy misy rivotra, mikohaka sy mievina", ary Sasao matetika ny tananao. “Araka ny fitarihan'ny CDC.
Fampivoarana fohy: raha misokatra izy dia afaka mandeha! Na izany aza, satria mbola tsy azontsika antoka fa tsy hanaparitaka ny COVID-19 ny olona vita vaksiny, dia tokony handray fepetra fanoherana ny virus isika, toy ny fanaovana sarontava sy ny fanalavirana.
Hatreto, ny CDC dia tsy nanavao ny làlan'ny dia. Ny departemantan'ny fahasalamam-bahoaka any California dia mbola manoro hevitra ny mponina tsy tokony handeha mihoatra ny 120 kilaometatra miala ny tranony raha tsy hoe ho an'ny tanjona fototra.
Ny CDPH koa dia mandrara manokana ireo mpizahatany tsy hanao dia lavitra na fitsangatsanganana, ka mety hiandry ianao hamandrika ny fialantsasatra mandra-piovan'ny torolàlana ofisialy
Dr. Chin-Hong avy amin'ny University of California, San Francisco dia nilaza fa ny antony tsy nametrahan'ny CDC torolàlana fitetezam-paritra vaovao dia mety ho azo tanterahina-satria mety hahita olona betsaka vita vaksiny sy tsy vita vaksiny ianao rehefa mandeha ary efa marika manan-danja.
Hoy izy: “Nandritra ny vanim-potoana nisehoan'ny valanaretina isan-karazany tany Etazonia, dia tsy te-hamporisika ny fivezivezena izy ireo.” “Satria ny fitsangatsanganana sy ny dia dia nifandraika tamin'ny fitomboana teo aloha tany Etazonia, manantena izy ireo… tsy hamporisika izany amin'izao vanim-potoana marefo izao. Karazana hetsika. ”